Fanamafisana sy fanentanana ny rehetra amin'ny Covid-19
Naseho ny : 18 desambra 2020
Fanamafisana ny fanentanana ny rehetra amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. Nahazo lesona lehibe isika rehetra tamin'ny dingana voalohany niainantsika ny valanaretina Covid-19 iny. Tsapa ny faharefoantsika rehetra na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy, na ara-toekarena. Aleo hamafisina ny fanarahana ireo fepetra fiarovana fa tsy mbola foana ny valanaretina sao ho mafimafy kokoa ny dingana faharoa...
Ny lanjan'ny famakiana boky...
Ny lanjan'ny famakiana boky eo amin'ny fiainan'ny tanora. Loharanom-pahalalana ny Boky. Mamporisika ny saina ho tia karokaroka ny famakiana azy. Manentana ny tanora hamaky boky fa sady fialamboly izy ireny...
VIH/Sida : alao ny tahotra...
Matahotra ny olona momba ny VIH/Sida. Matahotra ny valin'ny fitiliana raha sanatria mitodra tsimokaretina, ny fiaraha-monina, ny vokatr'izany eo amin'ny fiainana. Mila miray hina sy mandray andraikitra ny rehetra handresena ny fipariahan'ny VIH sy ny Sida sy handresy ny tahotra...
Pejy 2 amin'ny 3